Himalaya Dainik » कक्षा १ देखि नै प्रथम सागरको उच्च शिक्षा पढ्ने सपना !
कक्षा १ देखि नै प्रथम सागरको उच्च शिक्षा पढ्ने सपना !
कक्षा १ देखि नै प्रथम भइरहने झिमरुक गाउँपालिका ४ बांगेमरोठ प्यूठानका सागर जिसी यसवर्षको एसईईमा राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण भए।लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय बांगेफेदीमा अध्ययनरत उनले ३ दशमलव ५५ जीपीए ल्याए।झि मरुक क्षेत्रमा माध्यामिक तहका ९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
सयौँ विद्यार्थीलाई उछन्दै उनी गाउँपालिकाकै बढी जीपीए ल्याउने दोस्रो विद्यार्थी बने। शिक्षकका अनुसार बाल्यकालदेखि नै उनी पढाइमा लगनशील थिए। प्रतिशतमा हेर्दा उनले एसईईमा ८८ दश मलव ७५ प्रतिशत ल्याएका छन्।
विज्ञान विषय पढेर उनको डाक्टर बन्ने सपना छ। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि उनी राम्रो अंक ल्याएर उर्तीण भए। गरिबीका कारण जिसीको उच्च शिक्षा पढ्ने सपना अधुरै छ। आफूसँगै एसईई उत्तीर्ण गरेका साथीभाई विद्यालय भर्ना भएर पढाइलाई अघि बढाइसके। खाली समयमा धेरै साथीसंगीले ‘व्रिजकोर्स’ समेत पुरा गरे।उनी घरमै एसईईको मार्कसिट हेरेरै दिन बिताएका छन्।
तीन भाइबहिनी मध्ये उनी जेठो छोरा हुन्। आमाले पाँच वर्षअघि दोस्रो विवाह गरिन्। बुवा धर्मेन्द्र बहादुर जिसी अपांग छन्। उनी बोल्न सक्दैनन्। गाउँमा मजदुरी गरेर जीविका चलाएका छन्।
प्रकाशित मिति ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०२:०५